रबिलाइ नै धरधरी रुवाउने गरि कसले लेख्यो यस्तो भावनात्मक खुल्ला पत्र पढ्नु होस् ! – हाम्रो ईकोनोमी
रबिलाइ नै धरधरी रुवाउने गरि कसले लेख्यो यस्तो भावनात्मक खुल्ला पत्र पढ्नु होस् !
प्रकाशित मिति: ८ फाल्गुन २०७५, बुधबार
प्रिय मित्र रबि लामिछाने ज्यु नमस्कार
आज हाम्रो देशबाट इमान्दार र असल मान्छेहरु पलायन हुन बाध्य छन् । नेपाललाई माया गरेर समाजमा केहि सकारात्मक काम गर्नेहरु विरुद्ध अनेकौं प्रश्न उठेको छ । लाखौं मान्छेलाई परेको पिडामा मलम लगाउने विरुद्ध चर्चा र परिचर्चा हुनु स्वभाविक नै हुन्छ ।
धर्म गर्नेहरुलाई नर्कमा पुर्याउने समाजको उल्टो बाटोमा छौ । निस्वार्थ भावका साथ समाजको अनेकौं दुःखमा मलम लगाउने तपाईंको साहसिक कदम प्रति म सधैं सम्मान व्यक्त गरिरहने छु ।
न्याय अधिकार र उद्धार राहत प्रदान गर्ने असल पात्र तपाईंहरु हजारौं चेलीबेटी विदेश बाट उद्धार गरि न्याय दिलाउनु भएको छ । तर आज तपाईंलाई कुन रूपमा पारिवारिक कुरामा जोडियो यो बिलकुल गलत विषय हो । पारिवारिक कुराको विषय समाधानको अनेकौं बाटोहरु छन् । गरिब दुःखीहरुको आवाज बोल्ने भ्रष्ट,तस्करहरुको पर्दाफास गर्ने त्यो साहसिक कदममा कहिले पनि कमि नहोस् । बरु झन खरो झन् बलियो र झन आटिलो भएर आउनुहोला । तपाईं सँग अझै ठुलो आसा,भरोसा र अपेक्षाहरु छन् ।
जीवनमा अनेक दुख र संघर्ष बाँकी नै छन । पसिना बेच्न प्रदेश पुगेको युवा युवतीलाई अनेक यातना गृहमा राखिन्छ । उद्धार गर्न रबि लामिछाने चाहिने हो भने धेरै बिरोध होइन बरु सकारात्मक आलोचना र अझै ठूलो सामाजिक कामको अपेक्षा गर्नुपर्छ । मन्दिरमा पुज्ने मुर्ति मनोबल बढाउनको लागी पुजा गरिन्छ । तर असल मुर्ती अन्याय परेकाहरुको आँसु पुछ्दै न्याय दिलाउन सहयोग पुर्याउनलाई मानिन्छ । जसले पिडितको सहयोग गर्छ त्यहीँ नै पीडितको भगवान हो । अझै धेरै सामाजिक कामको अपेक्षा सहित हृदय देखी सम्मान…
नेपालमै नेटवर्किङ वेश्यावृत्ति : स्कुल ड्रेसमै बालिका सहित ८ जना पक्राउपछि खुल्यो यस्तो तथ्य